ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ KRW, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တောင်ကိုရီးယား Won က, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — KRW ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တောင်ကိုရီးယား Won က, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,88 KRW တောင်ကိုရီးယား Won က
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/KRW ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и တောင်ကိုရီးယား Won က (KRW). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
တောင်ကိုရီးယား Won က (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို KRW) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ.
2000 1 753,41
50004383,53
10000 8 767,06
20000 17 534,13
50000 43 835,32
တောင်ကိုရီးယား Won က (KRW)
1000 1 140,63
20002281,27
50005703,16
10000 11 406,33
20000 22 812,65
50000 57 031,64
ငွေကြေးက ISO code ကို KRW
အထိမ်းအမှတ် ₩ • 원 • 圓 • 元
အနု Chon (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0336 s.